Tirakoobka Suuqgeynta Mobaylka ee 2015 | Martech Zone
Tirakoobka Suuqgeynta Mobaylka ee 2015
Arbacada, Agoosto 19, 2015 Arbacada, Agoosto 19, 2015 Douglas Karr
Maaha wax lala yaabo in aynu wadaagno xogtan maalintii aan booqannay xarunta Bluebridge, barmaamij codsi moobil dijitaal ah. Waxaan haynaa codsi aad u adag oo moobiil ah, laakiin shirkaddu way ka fog tahay moobiilka, haddana waxaan ku xannibnay codsi moobiil jaban.
Waan ognahay inaan luminay xoogaa hawlgal ah anagoo ku riixaynin waxyaabahayaga barxadda. Waxaan sugeynay inaan helno nooc cusub, Bluebridge waxay leedahay qalab aad u wanaagsan oo aad u wanaagsan. Waxay qabanayaan shaqo aan caadi ahayn oo si dhakhso leh ayey u korayaan.
Korodhka degdegga ah ee korantada casriga iyo kiniiniga la korsaday ayaa saameeyay ku dhowaad dhinac kasta oo suuq-geynta dijitaalka ah. Saameyntu waxay u dhaxeysaa 'moobil-saaxiibtinimo' algorithm-kii ugu dambeeyay ee natiijooyinka raadinta taleefannada casriga ee Google iyada oo loo marayo heerarka beddelka hoose ee taleefannada casriga ah, isticmaalka warbaahinta bulshada ee moobiilka iyo hubinta in emaylkeennu uu yahay mid saaxiibtinimo leh. Dave Chaffey
Waxyaabaha ugu muhiimsan ee ka socda Gobolka Suuqgeynta Mobaylka 2015
Waqtiga 86% ayaa lagu qaataa codsiyada moobiilka iyo websaydhka moobiilka. Haddii aad rabto inaad ku dhex gasho taleefanka gacanta, waa waqtigii aad maalgashan lahayd dalabka moobiilka!
90% dadka wax iibsada ee casriga ah waxay u isticmaalaan taleefankooda waxqabadyada horay loo iibsado iyo 84% dadka wax iibsanaya waxay adeegsadaan aaladooda si ay uga caawiyaan muujinta inta ay ku jiraan dukaan.
25% guud ahaan raadinta weydiimaha hadda waxay ku jiraan qalab mobile ah.
In 2016, kharashka xayeysiiska moobaylka ayaa ka badnaan doonta kharashka ku baxa desktop-ka, iyadoo ku dhowaad $ 70 bilyan oo adduunka oo dhan ah.
Qiimaha furan emaylka gacanta koray 180% seddex sano gudahood, iyadoo 48% dhammaan e-mayllada laga furay taleefannada casriga ah.
Tags: 2015kharashka xayeysiiska moobaylkacodsiyada mobileapps mobileemaylka gacanta furansuuq geynta moobiilkatirakoobka suuq geynta mobiladatirooyinka suuq geynta moobiilkaraadinta moobiilka
4 Muujinta Waxaad ku kashifi kartaa Xogta iibka
RelateIQ: Sirdoonka Xiriirka Awoodda CRM